UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii khasaaraha ka dhashay ee ka dhacay G/Bakool | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii khasaaraha ka dhashay ee ka dhacay G/Bakool
UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii khasaaraha ka dhashay ee ka dhacay G/Bakool
Xudur (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxaysa dagaal gaystay Khasaare dhimasho iyo dhaawac oo duleedka Magaalada Xudur ku dhexmaray maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo Ciidamada dowladda.
Dagaalka ayaa wuxuu ka dhacay meel ku dhaw deegaanka Abal, kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen Saldhig Ciidamada ay halkaasi ku leeyihiin.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Militariga Soomaaliya ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerarka kaga yimid Ururka Al-Shabaab, waxaana ay sheegeen Khasaare inay ku gaarsiiyeen dagaalka.
Inkastoo Saraakiisha aysan tilmaamin Khasaaraha dhabta ah ee Al-Shabaab ay ku gaarsiiyeen dagaalkaasi, haddana waxa ay sheegeen kaliya inuu jiro Khasaare.
Si dhab ah looma oga waxa kala gaaray labada dhinac ee dagaalamay, waxaana xaaladda goobihii lagu dagaalamay ay tahay mid degan.
Ururka Al-Shabaab ayaa weerara fariisimada Ciidamada dowladda & kuwa Amisom ay ku leeyihiin Gobolada dalka.